Sonke sivile ilizwi esithi, "Ukuba awukwazi ukuthatha ubushushu, phuma ekhitshini." Kodwa ngelihlobo , ungayifaka igama lemoto kwisivakalisi nje ngokulula.
Kutheni le nto imoto yakho ivakalelwa njengehovini, kungakhathaliseki ukuba ubeka iplanga okanye umthunzi? Gweba i-greenhouse effect.
I-Mini Minhouse Effect Effect
Ewe, umphumo ofanayo wokubamba ukushisa obamba ukushisa emoyeni kwaye ugcine iplanethi yethu kwindawo epholileyo yokuphila ikwaxanduva lokubhaka imoto yakho kwiintsuku ezifudumeleyo.
I-windshield yemoto yakho ayikuvumeli kuphela ukujonga okungagungqiyo kwindlela ekuhambeni kwendlela, ivumela ukukhanya kwelanga ibe yindlela engenazo ngaphakathi ngaphakathi kweemoto yakho. Kanye nje, ukukhanya kwelanga elifutshane elidlulayo lidlula kwiifestile zemoto. Ezi festile zifudumala nje kuphela, kodwa izinto ezinemibala ebomvu ezibetha i-sunrays (njengedeshibhodi, isondo, kunye nezihlalo) zivutha kakhulu ngenxa ye-albedo yazo ephantsi. Ezi zinto zichasayo, ngokukhawuleza, ukufudumala emoyeni ojikelezayo nge- convection kunye nokuqhuba.
Ngokomxholo we-University of San Jose ka-2002, ukushisa kweemoto ezifakwe kwi-gray yangaphakathi ziphakama malunga nama-19 degrees F ngemizuzu eyi-10; 29 degrees ngexesha lemizuzu engama-20; Ama-degrees ama-34 kwisiqingatha seyure; Ama-degrees ama-43 ngeyure eli-1; kunye nama-degree 50-55 ngaphezu kweeyure ezingama-2-4.
Itheyibhile elandelayo inika ingcamango yokuba kungakanani ngaphezulu kweqondo lokushisa lomoya langaphandle (° F) ingaphakathi lakho lemoto linokufudumala kwixesha elithile.
> 1 iyure
Njengoko ubona, nangomhla onomdaka o-75, ngaphakathi kweemoto yakho kuya kufudumala kumaqondo okushisa amanani amathathu kwimizuzu engama-20 kuphela!
Ithebhile ityhila enye into evula amehlo: ukuba i-third-thirds ye-spike ye-temperatures iyenzeka kwimizuzu engama-20 yokuqala! Yingakho abashayeli banxuswa ukuba bangashiyi abantwana, abakhulileyo, okanye izifuyo kwimoto epakiweyo nayiphi na ixesha-nokuba kungakhathaliseki ukuba lifutshane kangakanani - ngenxa yokuchasene noko unokucinga, ubuninzi beqondo lokushisa luya kwenzeka kule mizuzu embalwa yokuqala.
Kutheni ukuqhawula iWindows ayiNcedo
Ukuba ucinga ukuba ungayiphephela ingozi yemoto eshushu ngokukhupha iifestile zayo, cinga kwakhona. Ngokomxholo ofanayo we-University of San Jose, ukushisa ngaphakathi kweemoto kunye neefestile zayo kwanyuka ukuphakama kwisantya se-3.1 ° F nganye ngemizuzu emihlanu, xa kuthelekiswa ne-3.4 ° F kwiifestile ezivaliweyo. Ilungelo alinakwaneli ukukhupha ngokukhawuleza.
Ukunikezela kwelanga ngeNtshonalanga
Ama-sunshades (ama-shades afanele ngaphakathi kwiphephethi-moya) ngokwenene yindlela epholileyo yokupholisa ngaphezu kweefestile zokuqhawula. Banokunciphisa ubushushu bemoto yakho malunga nama-15 degrees. Ukwenza isenzo sokupholisa ngakumbi, intwasahlobo yohlobo lwefestile kuba le nto ibonakalisa ukushisa kwelanga emva kweglasi kunye nemoto.
Isizathu sokuba Kutheni imoto imoto ibe yingozi
Imoto eshushu idityanisayo ayiyiyo kuphela into engonwabisayo , iyingozi nakwimpilo yakho.
Njengokugqithiseleyo ukushisa kwemoya ephezulu kunokubangela ukuguquka kokushisa okufana nesifo se-heatstroke kunye ne-hyperthermia, ngoko ke kunokukwazi ukukhawuleza kubakho ngenxa yokuba. oku kukukhokelela kwi-hyperthermia kwaye mhlawumbi ukufa. Abantwana abancinci kunye neentsana, asebekhulile kunye nezilwanyana ezifuywayo ziyakhathazeka kakhulu ngenxa yokugula ngenxa yokugula ngenxa yokuba imizimba yabo ayinamakhono amaninzi ekulawuleni ubushushu. (Ubushushu bomzimba womntwana bubuyisa i-3 ukuya kuma-5 ngokukhawuleza kunomntu omdala.)
Izixhobo kunye nezixhumanisi:
I-NWS Yokhuseleko Lwezithuthi: Abantwana, Izilwanyana kunye nabadala.
Ukushisa i-Heatstroke Ukufa kwabantwana kwizithuthi. http://www.noheatstroke.org
McLaren, uNull, Quinn. Ukuxinezeleka kobushushu kwiiNqwelo eziValiweyo: Iimpepha eziMgangatho oLungeleleneyo Ngenxa yokushisa okubalulekileyo kuphakama kwiimoto ezifakiwe. Izifo zengqondo Vol. 116 No. 1. Julayi 2005.
Ukuwa kwe-equinox - iLibra, i-Scorpio kunye neSagittarius
UMzalwana kunye noMzalwana kwiNFL? Kukho iitoni zazo
IYunivesithi yase-Saint Mary Admissions
I-FAQ yokwakha i-FAQ - Ngaba kufuneka njani abaQobisi beBhodi abangaphezu kwama-40?
I-Olympic Figure Skating Champion uCarol Heiss ngo-1960